किन सलमान खान कालो कपडामा बढी देखिन्छन्, यस्तो रहेछ रहस्य – ramechhapkhabar.com
किन सलमान खान कालो कपडामा बढी देखिन्छन्, यस्तो रहेछ रहस्य
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता प्राय जसो कालो कपडामा देखिन्छन् । प्राय जसो जिन्स र टिसर्टमा देखिने उनको यो बानीबारे उनका डिजाइनरले खुलासा गरेका छन् । सलमान खानका डिजाइनर ऐशले रेबलोले एक सोशल मिडियामा भएको फ्यानहरुसँगको सम्वादमा यस्तो कुराको खुलासा गरेका थिए ।
उनलाई फ्यानहरुले किन सलमान खान कालो कपडामा बढी देखिन्छन्, उनको डिजाइन फेरिदिनुहोस् भन्दै आग्रह गरेका थिए । जबाफमा ऐशले भनेका थिए,‘सलमान खानलाई कालो बाहेक अरु रंगको कपडा मन पर्दैन । उनलाई कालो कपडा नै ज्यादातर सुहाउँछ ।’
सम्बन्ध विच्छेदपछि पनि लद्दाखमा एकसाथ देखिए आमिर-किरण
३ जुलाईमा बलिउड अभिनेता आमिर खान र उनकी श्रीमती किरण रावले १५ वर्षको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि पनि उनीहरु पुन: एकसाथ देखिएका छन्।
फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’को सुटिङका क्रममा आमिरसँगै किरण समेत लद्दाख गएकी छिन्। दुबै जना रमाइलो गर्दैँ डान्स गरिरहेको एक भिडियोमा देख्न सकिन्छ।
लद्दाखको परम्परागत पोशाक लगाएर आमिर-किरण सँगै नाचेको उक्त भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ। भिडियोमा लद्दाख निवासी स्थानीयहरुले आमिरलाई त्यहाँको परम्परागत डान्सको स्टेप सिकाइरहेको र उनीहरुले त्यसैको नक्कल गरिरहेको देखिन्छ।
सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेपछि पनि आमिर र किरण एक भिडियोमा सँगै एकअर्काको हात समात्दै देखिएका थिए। साथै सम्बन्ध परिवर्तन भए पनि दुवै एक अर्कालाई सधैं साथ दिने समेत जानकारी गराएका थिए।
दु : खबर, कुवेतमा सवारी दुर्घटनामा परी एक नेपाली युवाको मृ’त्यु
काठमाडौं, १५ साउन । काठमाडौं – कुवेतमा सवारी दुर्घटनामा परी होम डेलिभरी सेवामा काम...
दु : खद खबर, बेलायतमा साइकलबाट लडेर नेपाली युवाको मृ’त्यु
दु : खद खबर पोर्चुगलमा कार्यरत एक नेपालीको मृ’त्यु
जालसाँझी गरेको आरोपमा एक नेपालीले अमेरिकामा पाए यस्तो सजाय
लकडाउन खुले पछि नेपाल आउने सपना बोकेका करवीर मलेशिया मै अस्ताए !
कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेले एक सय डलर पाउने
काठमाडौं, १५ साउन । काठमाण्डौ – अमेरिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेले एक सय डलर...
अमेरिकामा शक्तिशाली भूकम्प, सुनामी आउन सक्ने चेतावनी
अ श्लिल चलचित्र बनाएको आरोपमा नायिका शिल्पा शेट्टिका श्रीमान प क्राउ
ह्वाट्सएपले किन ब्लक गर्यो २० लाख भारतीय प्रयोगतकर्ताको एकाउन्ट ?
ताजिकिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प, पूर्ण विवरण भने आउन बाँकी